Big City Small World (Series2Episode7- Alone For Christmas?) - Myanmar Network
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 15:47 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode7- Alone For Christmas? (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၇) – ခရစ္စမတ် မှာ တစ်ယောက်တည်းလား?)
Sereis2Episode7- Alone For Christmas ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Our friends are staying here for Christmas. Find out if they are spending this festive season alone.
(ကျွန်ုပ်တို့၏ သူငယ်ချင်းများသည် ဤနေရာတွင် ခရစ္စမတ် ပွဲတော်အတွက် နေကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤပွဲတော်ရာသီမှာ သူတို့ဟာ တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေကြမလားဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်)
(တစ်ယောက်ယောက်ကများ လက်ဆောင်ဆိုတာကို ပြောလိုက်လား? ငါက လက်ဆောင်တွေ နှစ်သက်တယ်…)
(ငါဆိုလိုချင်တာက ကော်ဖီဆိုင် ဆက်ဖွင့်တာရယ် – နင့်ဆိုင်လည်းတ တူတူပါပဲ – အဲ့ဒါတွေက ခရစ္စမတ်အကြိုလက်ဆောင်နဲ့ တူတယ်လို့!)
(လုပ်မနေပါနဲ့ – အခုဆိုရင် ရက်နည်းနည်းပဲလိုတော့တာ!)
(ဟုတ်ပါတယ်လေ… နင်မှန်ပါတယ်။ အခုဆို ငါစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ ဟေး Tony!)
(လုပ်စမ်းပါ Tony ရာ! ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်တောင်မှ ပျော်နေမှာပါ။ ကော်ဖီဆိုင်က ဆက်ပြီး ဖွင့်ရတော့မယ်လေ!)
(ငါတို့ လှုပ်ရှားမှုက အောင်မြင်တယ်လေ!)
(ဟုတ်ပါတယ်… အာ၊ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!)
(ကဲ Fadi – နင် ခရစ္စမတ်မှာ ဘာလုပ်မှာလဲ၊)
(ဘာမှ သိပ်လုပ်စရာမရှိပါဘူး – ငါ့မိသားစုနဲ့ပဲ နေဖြစ်မယ် ထင်တယ်...)
(ဟုတ်တယ်၊ ငါရောပဲ – ခရစ္စမတ်ကို မိသားစုနဲ့ မဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ...)
(ဟုတ်တယ်၊ ခရစ္စမတ်ကို နင်နဲ့ အတူတူကုန်ဆုံးရရင် ကောင်းမှာပဲ...အာ၊ ငါဆိုလိုချင်တာက ဒီကလူတွေအားလုံးနဲ့လို့ ပြောတာပါ...)
(နင့်ကိုပြောမယ် – ဆင်ခြေတစ်ခုလောက် လုပ်ကြံပြီး ပြောရအောင်!)
(မိသားစုတွေကို ခဏထားခဲ့ပြီး… ဒီမှာ ညစာလာစားရအောင်!)
(ဒီမှာ? ငါကတော့ ကော်ဖီဆိုင်က ခရစ္စမတ်နေ့မှာ ဖွင့်မယ်မထင်ဘူးနော်…)
(ငါတို့ Tony ကို ငါတို့အတွက် သက်သက်ဖွင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းကြတာပေါ့ – ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့တာကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့…)
(သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်ပဲ! ဒါပေမာ့် ငါက Joe ကို တော့ ခေါ်လာရမယ်နဲ့ တူတယ်…)
(အို ဒုက္ခပါပဲ။ နင့်ရဲ့ ဆိုးတဲ့တူ Joe။ ငါကသူ့ကိုတောင်မေ့နေပြီ...)
(ဒါပေါ့ ငါက ခရစ္စမတ်အမှီ ပြန်လာတာ – ငါဘယ်လိုလုပ်မေ့မှာလဲ! ငါက လန်ဒန်က ခရစ္စမတ်ကို နှစ်သက်တယ်လေ… ငါတို့ တရုတ်ပြည်မှာ ခရစ္စမတ်ကို ပွဲမလုပ်ကြဘူး ဒါပေမာ့် ငါကတော့ ဒီမှာ ကြိုက်တယ် – အစားအသောက်တွေအများကြီး၊ လက်ဆောင်တွေ…)
(ငါလည်း ခရစ္စမတ်ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုလန်က ခရစ္စမတ်က သိပ်ထူးခြားလွန်းတယ်။ ငါကတော့ ဒီနှစ် လွမ်းနေရမှာပဲ...)
(နင့်မိသားစုဆီကို ပြန်မလည်ဘူးလား? နင်က ပိုလန်ပြန်နေကျပဲကို)
(ငါသွားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ နှစ်တိုင်း ဒီအချိန်ဆို လေယာဉ်လက်မှတ်ခတွေက ဈေးကြီးတယ်)
(သက်ပြင်းချ၍) (ဒါဆို ငါနဲ့ Magda နဲ့က ခရစ္စမတ်မှာ ၂ ယောက်တည်းပဲပေါ့)
(ငါလည်းပါတယ်လေ ¬ ဘရာဇီးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မပြန်နိုင်ဘူး!)
(ငါအကြံရပြီ ¬ တကယ်လို့များ Fadi နဲ့Olivia ကသာ Tony ကို ကော်ဖီဆိုင် ဖွင့်ခိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ငါ အားလုံးအတွက် ခရစ္စမတ် ညစာကို သေသေချာချာ ချက်ပေးမယ်၊ ချက်ရပြုတ်ရတာကို ငါသဘောကျတယ်လေ)
(အကြံကောင်းပဲ ¬ ပိုလန်မှာဆိုရင် ခရစ္စမတ်ကျရင် ဟင်းအမယ် ၁၂ မျိုးပါတဲ့ စားပွဲကျင်းပကြတယ်!)
(၁၂မျိုးတောင်! အိုး၊ အဲ့ဒါက အများကြီးပဲ...)
(နင့်အတွက် ငါ ပိုလန်ရိုးရာ အစားအစာကို ကြိုးစားပြီးချက်ပေးမယ် Magda... ပြီးရင်တော့ နင့်အတွက် တစ်ခုခု အထူးလုပ်ပေးမယ် Sarah ရေ.. ငါကတော လုပ်ချင်တယ်...)
(ရှင်က အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ ဒါပေမယ့် ငါ့ကို တရုတ်အစားအစာချက်ဖို့မလုပ်ပါနဲ့! ခက်တယ်… နင့်ကိုယ်ပိုင် အထူးဟင်းလျာသာ ချက်ပါ ¬ ငါက အသစ်အဆန်းကို စမ်းသပ်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်!)
(ဒါကို ကြားနေရတာ ပါတီနဲ့တူတယ်! Harry - နင်ရော? ခရစ္စမတ်မှာ ဘာလုပ်မှာလဲ?)
(အင်း ငါကတော့ အမေပဲရှိတာ။ သူနဲ့ပဲ ရှိနေမယ်ထင်တယ်)
(ရှင်နဲ့ ခရစ္စမတ် ညစာအတူတူစားရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာပဲ...)
(ဟုတ်တယ် ကောင်းမှာပဲ... နင်ရော မိသားစုနဲ့ တူတူ မနေဘူးလား...)
(တကယ်တော့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲလေ့ မရှိဘူး…)
(ဒါဟာ ဘာသာရေးပွဲတော်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့!)
(ဟုတ်တယ်။ ငါသိပါတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးက ခရစ္စမတ်မှာ ပျော်နိုင်ပါတယ်!)
Olivia: Well, why don’t you two try and join us...
(ဒါဆိုရှင်တို့နှစ်ယောက် ငါတို့နဲ့ လာပေါင်းပါလား…)
(တစ်ယောက်မှ Tony ကို မမေးရသေးဘူး...)
(အို အင်း ဟုတ်သားပဲ...သွားလေ Olivia - နင်မေးလိုက်...)
(ကောင်းပါပြီ... အာ... Tony!)
(နင် ခရစ္စမတ်မှာ ဘာလုပ်မှာလဲ?)
(ရှင့်ကို ခရစ္စမတ် မှာ ကျွန်မတို့နဲ့ တူတူဆုံဖို့ ဖိတ်ချင်လို့!)
(အော်...အော်၊ တော်တော်သဘောကောင်းတာပဲ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လက်ခံပါတယ်...)
(အာ.. ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရစ္စမတ်ညစာကို ဒီမှာလုပ်ချင်တယ်!)
(အာ… ကောင်းပြီလေ။ ဒါပေမယ့် ငါကတော့ စားပြီးရင် ပန်းကန်တွေ မဆေးနိုင်ဘူးနော်!)
(ဒါကတော့ လုပ်ဖူးသမျှတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ခရစ္စမတ်ပါတီ ဖြစ်မှာပဲ!)
(sounds of eating and drinking, laughter) (စားသောက်နေကြသည့် အသံများ ရယ်မောသံများ)
(ဒီမှာ! ဘရာဇီး အထူးဟင်းလျာ - ဒါကတော့ သင်္ဘောသီး ...)
(ပြီတော့ သောက်စရာ capirinha ပါ!)
(ချီးယား(စ)! ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ္စမတ် ဖြစ်ပါစေ!)
(ပြီးတော့ ငါက ငါ့အမေရဲ့ ခရစ္စမတ် ပူတင်း ယူလာတယ်!)
(မဟုတ်သေးဘူး နင်စားကြည့်လိုက်ပါ! အရသာရှိတယ်!)
(crashing noise) (ကွဲကျသံ)
(သူမီးလုံးတွေ ခွဲပစ်လိုက်တယ်! ဒီကောင်လေး…)
(မဟုတ်သေးပါဘူး - ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်းရအောင်!!!)
Olivia: Good idea! (ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံပဲ!)
(အိုး၊ ကောင်းတယ် ဒါမှတကယ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာ!)
(ဟုတ်တယ်နော်! Joe! ဖယောင်းတိုင်တွေကို မထိနဲ့!)
(နင်နဲ့ တူတူရှိနေရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် Olivia...)
(အင်း ဟုတ်တယ် နင့်ကိုရောပဲ...)
(အားလုံးက အဲ့ဒါကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်... နင်လည်းတူတူဖြစ်ပါစေ Sarah...)
(အာ၊ အင်း ငါလည်း ထင်ပါတယ်..)
(ငါပြေခဲ့သလိုပဲ ¬ ဒါကတော့ အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်ပါတီပဲ! ငါက အမြဲမှန်တယ်လေ!)
All: Happy Christmas!
(ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ္စမတ် ဖြစ်ပါစေ!)
Permalink Reply by dr hla myo thant on February 6, 2013 at 22:28
i love this episode. very good!plz share more lessons.
Permalink Reply by Hnin Nway Naing on July 28, 2013 at 11:14